सेल्टल्ट समीक्षा: वेब डेटा स्क्रैपिंग उपकरण जसले वास्तवमा तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ
हामी जान्दछौं कि web scraping प्रविधिमा विभिन्न वेबसाइटहरूबाट लक्ष्यीकरण र जानकारी निकाल्दै समावेश गर्दछ. अधिकतर व्यवसायहरूले डाटामा निर्भर गर्दछ, र एक साधारण वेब स्क्रैपिंग उपकरणले विभिन्न डाटा-सम्बन्धित समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ जुन हामीलाई गतिशील र उपयोगी सामग्री प्रदान गर्दछ।.
वेब स्क्रैपिंग उपकरणको ठोस लाभहरू तिनीहरू प्रयोग गर्न सजिलो छन् र केहि सेकेन्ड भित्र सटीक डेटा निकाल्न सक्दछ।. केही विकल्पहरू निःशुल्क छन्, जबकि अन्य भुक्तानी गरिन्छ. वेब स्क्रैपिंग उपकरणहरू उनीहरूको सुविधा, विकल्पहरू, र पोर्टेबिलिटीमा आधारित एकअर्काबाट भिन्न हुन्छन्. तीमध्ये केही कोडहरू चाहिन्छ जब अरूले तपाईंलाई प्रोग्रामिंग कुञ्जीहरू आवश्यक पर्दैन.
1. पार्स हब
पार्सहेबले कुकीहरू को समर्थन गर्दछ, रिडिरेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट, र AJAX धेरै वेबसाइटहरु क्रल गर्न र स्क्रैप गर्न।. यसले यसको पहिचान गर्नका लागि यसको मेशिन सिक्किङ प्रविधिको बारेमा धन्यवाद, जानकारी पहिचान गर्न र हटाउन सक्छ. पार्स हब सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा सिफारिस गरिएको छ वेब डेटा स्क्रैपिंग उपकरणको लागि, विभिन्न ढाँचाहरूमा आउटपुट फाइलहरू उत्पन्न गर्दै. यो लिनक्स र विण्डोज प्रयोगकर्ताहरू को लागि आदर्श छ र पाँच क्रल गर्ने विकल्पहरू संग नि: शुल्क वेब अनुप्रयोग हो.
चाहे तपाईं ठूलो मात्रामा डाटा निकाल्न वा केही वेब क्रल परियोजनाहरू अनुसूचित गर्न चाहनुहुन्छ भने, Agenty तपाईंको लागि धेरै कार्यहरू गर्नेछ।. यस उपकरणको प्रयोग गरेर, तपाईं सँगै विभिन्न स्क्रैपिंग कार्यहरू चलाउन सक्नुहुन्छ र धेरै मात्रामा डेटा परिमार्जन गर्न सक्नुहुन्छ. यसले तपाईंको छनौटको प्रोग्रामिङ भाषामा डेटा संग्रह स्वचालित गर्न हामीलाई JSON, TSV र CSV ढाँचाहरू र API हरू प्रयोग गर्दछ।. यसको नि: शुल्क संस्करणमा सीमित संख्याहरू छनौट छन्, त्यसैले तपाईंले सशुल्क संस्करणको लाभ उठाउन सक्ने रकम फिर्ता रकमको साथमा आउन सक्नुहुन्छ.
CloudScrape अझै अर्को वेब डेटा स्क्रैपिंग उपकरण हो जसले डाटाको ठूलो संग्रहलाई समर्थन गर्दछ र कुनै डाउनलोड गर्न आवश्यक छैन. यो ब्राउजर आधारित एप सजिलै संग यसको क्रलरहरू सेटअप गर्न र वास्तविक समय डेटा निकाल्दछ. पछि, तपाइँ Google ड्राइभ र बाकसमा निकालेको डेटा सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ. नेट वा यसलाई CSV र JSON को रूपमा निर्यात गर्नुहोस्.
Datahut एक उच्च स्केलेबल, लचीला, र उद्यम-ग्रेड वेब डाटा निष्कर्षण उपकरण हो जुन तपाईंको सबै डाटा आवश्यकताहरु को लागी छ।. तपाईं सही जानकारी उचित मूल्यमा र 100% पैसा फिर्ताको गारंटी पाउन सक्नुहुन्छ. तपाईंले ध्यान दिनुपर्छ कि दत्ताहटको कुनै नि: शुल्क संस्करण छैन, तर यसको प्रिमियम संस्करण बजेट-अनुकूल हो र स्टार्टअप र स्थापना कम्पनीहरूको लागि उपयुक्त छ।. यसले धेरै साइटहरूको डेटा एकत्र गर्दछ र उत्पादनहरू, सामग्री, छविहरू, र प्रोफाइलहरू एकत्रित गर्दछ.
Webhouse. io एक वेब अनुप्रयोग हो जसले संरचित डाटाको लागि सिधा र सजिलो पहुँच प्रदान गर्दछ र विभिन्न कार्यहरू प्रदर्शन गर्न वेब क्रलिंग प्रविधि प्रयोग गर्दछ।. यसमा तपाईंको साइट सूचकांक र 200 भन्दा बढी भाषाहरूमा विभिन्न वेब पेजहरु बाट डेटा निकाल्ने क्षमता छ. यसले RSS, JSON, HTML र XML फाइलहरू समर्थन गर्दछ.
सबै भन्दा राम्रो डाटा स्क्रैपिंग उपकरण फिभेट्रन. यो एक शक्तिशाली र विश्वसनीय डेटा निकाय हो र तपाईंको ऊर्जा र समय बचत गर्दछ. दिइएको समयमा, फिभेट्रन बिना कुनै पनि मुद्दा 100 देखि 100000 वेब पृष्ठबाट निकाल्न सक्छ Source .